Labo Codayn: Caado Soomaali Cadibatey! | KEYDMEDIA ONLINE
Labo Codayn: Caado Soomaali Cadibatey!
By Bashir M. Hersi - Qaybihii hore ee qormada waxaan ku qaadaadhignay: madaxweynihii hore C/laahi Yuusuf Axmed, Guddoomiyaha Isbihaysiga Nabadda C/laahi Sheekh Xasan,Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Bal aan halkii ka sii amba qaadaynno, oon sii qodqodayna qolalka codleeyayaasha Soomaalida ka dhexbuuxa, Anagoo ka soo qaadanayna qaarkooda ugu yaabka badan. Dhammaan way ka siman yihiin laba jidlaynta, iyo inay dadka maankooda ku ciyaaraan, taasna dadka ayaa ugu wacan, haddiise la dhihi lahaa: “Habaarqabe, na dhaaf!” ilama ahan inuu heer nagu dhexgaari lahaa, haddaanse maamuus gaara, magac iyo mansab aanuu qalmin ugu darayno hubaal inuu halyey isu qaadan!
Anoo qormada gunaanaday, ayaan dul istaagay dood dhexmartay mudane Indhacadde iyo Xildhibaan Maxamad Cali Cismaan “Diinsoor” oo ku saabsanayd Ammaanka iyoCiidamada Shisheeye, mudane Indhacadde wuxuu ammaanay Ciidamada Itoobiya iyo Kenya, wuxuu hadalkiisa ku billaabay sidan: “Bismilaahi Wa Kafaa. Xildhibaankan wuu qaldan yahay, xaqna uma laha inuu eedeeyo ciidamada Itoobiya iyo Kenya, oo ah ciidamo walaalaheen ah! Oo noo soo gurmaday, maad adiga wax qabsatid? Intaad ciidamada walaalaheen ah wax ka sheegaysid!”.
Lama yaabbani, oo haddii sarriigtu kaa guurtay, adiga iyo yaxyax laga wareegtee, mudane Indhacadde, wax ka yar laba todobaad ayuu kala hadlay, mar Dastuurkamucaaraday, marna taageeray, kuma ekaysane, wuxuuba eedayn u jeediyey dadka ka soo horjeeda, qofku haddaan erayaduu dhahayo dhagtiisu maqlayn waa dhib, waana midda haysta laba codleeyayaasha Soomaaliyeed, moog iyo ogaalba waxay ku hadlaan dhagtoodu ma maqasho,
Ugu dambayn, mudane Indhacadde wuxuu yahay aan erayadan ku soo kobo. Waxaa lagu xasuustaa inuu si weyn uga soo horjeedi jiray Ciidamada Itoobiya, uuna u yaqaanayDowladdii C/laahi Yuusuf gaalo, oo dalka soo galisay Ciidamo gaalo, tan kali kuma ahan, wadaad xume oo dhan ayaa la qabay. Wuxuu sheegtay inuu AlShabaab aasaasayAlQaacidana ka tirsan yahay, qaybtii uu ku lahaa dagaalka sokeeyna ku dar. Anigu intii aan dhihi lahaaba, waxaan u daynayaa aqristaha, sida aan is iri iigama bannaan boose, aqriste, adiguba qiimayso.